Dhimma baasii haaromsa Mana Qopheessaa Magaala Finfinnee! – ኢትዮጵያ ቼክ
Dhimma baasii haaromsa Mana Qopheessaa Magaala Finfinnee!
Miidiyaaleen hammeentaa maallaqaa haaromsa Mana Qopheessaa Magaala Finfinneef bahe ilaalchisee odeeffannoo garagaraa kennaa jiru.
Miidiyaaleen eebba projektichaa gabaasan tokko tokko haaromsa Mana Qopheessaa Magaala Finfinneef birriin biiliyoona 2.2 ol baasii ta’uu gabaasaniiru.
Gama biraatiin immoo miidiyaaleefii dhaabbileen mootummaa haaromsi mana qopheessichaa birrii biiliyoona 1.5 ol akka fudhate gabaasanis turaniiru.
Akka fakkeenyaatti miidiyaan OBN projektichaaf birriin biiliyoona 2.2 ol baasii ta’uu gabaase.
Gama biraatin immoo Dhaabbatni Pireesii Itoophiyaa projektichaaf birriin biiliyoona 1.5 ol baasii ta’uu gabaase.
Kana malees Biiroon Komunikeeshinii Naannoo Oromiyaas guyyaa kaleessaa “birrii Bil. 1.5 oliin haaromfame’ jechuun fuula Feesbuukiirratti erga maxxansee booda lakkoofsicha gara birrii Bil. 2.2ti jijjiirera.
Dhimmi baasii haaromsa Mana Qopheessaa Magaala Finfinnee kunis fayyadamtoota miidiyaalee hawaasummaa tokko tokko biratti burjaajii yemmuu uumu taajjabneerra.
Kanaafis Itoophiyaa Cheek dhimmicha ilaalchisee hojii odeeffannoo mirkaneessuu hojjeteera.
Haaluma kanaan hoji gaggeessaa Waajjira Ijaarsa Projeektota Gurguddoo magaala Finfinnee kan ta’an Injinar Dabboo Tunkaa haaromsa mana qopheessichaaf Birriin Biiliyoona 2.2 ol baasii ta’uusaa haasaa sagantaa eebba projektichaarratti taasisaniin dubbachusaanii Itoophiyaa Cheek mirkaneeffateera.
Erga ijaaramee waggoota 57 ol akka lakkoofsise kan himamu Manni qopheessaa Magaala Finfinnee, iddoo oolmaa daa’immanii, mana kitaabaa, kutaalee leenjiifii qorannoo, galma tiyaatiraafii iddoowwan tajaajila biroo of keessatti kanqabu akka ta’e himameera.